သက်ဝေ: ဒီနေ့ ...
Posted by သက်ဝေ at 2:42 AM
khin oo may September 12, 2008 at 3:10 PM
စနေ. တန့င်္ဂနွေရှိပါသေးတယ် ညိမရဲ. ဒီလောက် စိတ်ဓါတ် မကျပါနဲ.ဦး။
ဇနိ September 13, 2008 at 12:01 AM
Yu Wa Yi September 13, 2008 at 1:53 AM
Moe Cho Thinn September 13, 2008 at 2:45 AM
အလုပ်များ မြန်မြန် အဆင်ပြေပြေ ပြီးပါစေ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေလေး အဓိပ္ပါယ်ရှိပါစေ အမရေ..
myatnoe September 13, 2008 at 5:16 AM
ဒီနေ့ စနေနေ့ ရှာရည်ပီး အားစားလေ့ကျင့်ရုံသို့သွားရမည်..။
ဒီနေ့ စာတွေမရ၍ စိတ်ညစ်သည်..။
ဒီနေ့..အမသက်ဝေ အလုပ်ပိသည့် စာရ၍ ဖတ်သည်..။
ဇနိ September 13, 2008 at 5:58 AM
မိုးသားမည်းမည်းတွေ ကင်းရှင်းသွားတဲ့တနေ့ ပြန်ဆုံမယ်.......
sonata-cantata September 14, 2008 at 8:27 PM
အမ အဲ့ဒီသောကြာနေ့ကို ကြောက်လို့ အလုပ်နားပစ်လိုက်တာ
အခု စနေရော တနင်္ဂနွေပါ မအားတော့ဘူး
တန်ခူး September 15, 2008 at 11:01 AM
သက်ဝေ… အလုပ်တွေ မြန်မြန်ပြီး၍ ရာသီဥတု သာယာကောင်းမွန်ပါစေ… ကောင်းကင်ကြီး ပြာပြီလားဟင်…
သက်ဝေ October 16, 2008 at 1:21 PM
မမခင်ဦး ကိုဇနိ ရီ ချိုသင်း မြတ်နိုး နိနိ မသီတာနဲ့တန်ခူး.. မှတ်ချက်များ၊ အားပေးစကားများ နဲ့ဆုတောင်းများ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ ခုလောလောဆယ်တော့ ရုံးမှာလဲ အလုပ်များ၊ အိမ်မှာလဲ အလုပ်များနဲ့အနားမရသေးပါဘူး...။
ကောင်းကင်ကြီး ပြာလွင်တဲ့ အချိန်ကို မျှော်ရတာလဲ မောလှပေါ့...။